Eluigwe: A na-ahọrọ Niños de la Luz dị ka "dị jụụ" Egwuregwu gam akporo nke ọnwa | Gam akporosis
Eluigwe: A na-ahọrọ Niños de la Luz maka egwuregwu anyị kachasị mma nke ọnwa na Androidsis. Ọ bụrụ na ụnyaahụ anyị zutere ọnwa kachasị mma, oge a bụ nke nwere ike iji egwuregwu kachasị mma, bụrụ nke kachasị eri ahụ ma ọ bụ naanị kpokọta usoro nke ihu na-eme ka ọ bụrụ ahụmịhe egwuregwu niile.
N’ebe a anyị agaghị ahụ ụdị egwuregwu GWENT nke na-amị ọtụtụ ihe, mana nke nwere ike dị ka Flappy Bird, Tetris ma ọ bụ Clash Royale n'onwe ya ya mere ọ jidere ya n'oge ahụ. Egwuregwu ọhụrụ a nwere ihe ọ bụla iji bụrụ ahụmịhe na-enweghị nke ọzọ ịbụ onye na-elekọta mmadụ niile.
1 Ijide aka na ndị egwuregwu ndị ọzọ
2 Chọọ ezigbo mkpanaka
Ijide aka na ndị egwuregwu ndị ọzọ
Ọ bụrụ na anyị ahọrọla Sky: ofmụ nke Ìhè ọ bụ maka ọtụtụ ebumnuche, mana otu n'ime ha, ewezuga nke ahụ Visual ebube na-emeghe, ọtụtụ ụwaỌ bụ maka oge ndị ahụ anyị ga - ejide aka nke onye ọkpụkpọ ọzọ ma ọ bụ nke a. Ọ bụ ụzọ gị si amata ọdịiche dị n'etiti ndị ọzọ na-egwu egwuregwu n'ịntanetị nke anyị nwere na gam akporo.
Nke ahụ bụ, ịbụ onye na-eme ọtụtụ mmadụ, anyị ga-achọ ndị enyi ala ọzọ iji nwee mkparịta ụka na ụlọ akụ na mba ndị anwansi. Oge pụrụ iche nke nnukwu ụda ahụ mere na maka ebumnuche nke ịghachite ìgwè kpakpando site na ụwa 7.
na ndị okike nke Njem Ha ahapụla anyị nnukwu egwuregwu na nke ha nwere ihe doro anya iji tinye ọdịnaya ọhụụ obere ntakịrị. Ha ga-eme nke a n'oge oge niile ma si otú a chịkọta ndị egwuregwu ahụ niile chọrọ ahụmịhe pụrụ iche na nke pụrụ iche; gafere nyocha anyị mere izu ole na ole gara aga.
Chọọ ezigbo mkpanaka
Dị ka GWENT na vidiyo anyị gara aga, Eluigwe: ofmụ nke Ìhè chọrọ mkpanaka nwere ezigbo ngwaike iji nwee ike ịkwaga ụwa ahụ mepere emepe na mmetụta ọkụ dị egwu, ihe ndị ahụ sitere n'okike ma rụọ ọrụ nke ọma na oge ndị a ga-enwe ọtụtụ ndị egwuregwu na-abịaru anyị nso.
O doro anya na ọ bụrụ na anyị ahọrọ maka ndị a console-dị ka ahụmahụ, anyị chọrọ ngwaike nke nwere ike ijikwa ha. Ọ gaghị ekwe omume ịmegharị ha site na igwe okwu 100-euro, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịnụ ụtọ ụdị egwuregwu ọhụrụ a nke na-achọ iji tụnyere egwuregwu PC, chee echiche banyere ịchekwa ịnweta egwuregwu ndị ahụ dị elu nke na-agagharị egwuregwu dị mfe dịka Sky: Ofmụ nke ìhè.
Eluigwe: Childrenmụ nke Ìhè nwere isi ihe pụrụ iche nke anyị ga-akwụghachi ụgwọ egwuregwu kachasị mma kwa ọnwa na nke ahụ agaghị eme ka ọ dịrị anyị mfe. Maraworị na ụbọchị ọ bụla anyị na-agbazinye onwe anyị iji nyochaa egwuregwu ọhụrụ, yabụ ụfọdụ n'ime ndị ahụ ga-abụ nke kachasị mma ma ọ bụ nke kacha mma nke Androidsis. Oge egwuregwu dị mma na-echere anyị! Ruo mgbe ọzọ.
Eluigwe: Childrenmụ nke Ìhè
Developer: Ụlọ ọrụ ahụ bụ GAME COMPANY INC
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Kachasị mma Androidsis egwuregwu nke ọnwa Eprel: Eluigwe: Childrenmụ nke Ìhè
E gosipụtara Xiaomi Mi 10 Ntorobịa: 6,57 "panel na quad igwefoto